आखिर के गर्दैछिन् धोनीकी पत्नी शाक्षी ? तस्विर बन्यो भाइरल - e-Sidha Nepal
आखिर के गर्दैछिन् धोनीकी पत्नी शाक्षी ? तस्विर बन्यो भाइरल
महेन्द्र सिंह धोनी २५ बैशाख २०७७, बिहीबार ०६:३५
लकडाउनले गर्दा मानिसहरु धेरै फुर्सदिला भएका छन् । यसै क्रममा भारतीय पूर्व क्रिकेट कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीकी पत्नी साक्षी धोनीले पनि अचम्म लाग्ने गरि सन्नी लियोनीको पोज देखाएकी छिन् । जुन तस्बिर निकै भाइरल नै बनेको छ ।
उनले फेसनयुक्त थुप्रै फोटोहरु सार्वजनिक गर्ने क्रममा एउटा ग्ल्यामर तस्वीरसमेत प्रदर्शन गरेकी छिन् । टाइम्स अफ इन्डियाले साक्षीका २२७ वटा तस्वीर सहितको समाचार राखेको छ ।
धोनी अहिले भारतीय क्रिकेट टिममा छैनन् । विश्वपकपछि उनले भारतीय टिमबाट खेल खेलेका छैनन् । यही मौकामा उनकी श्रीमती साक्षीले पनि उनीसंग समय बिताउने अवसर पाएकी छिन् । सन् २००८ मा धोनीसंग डेटिङ गर्न थालेकी साक्षी र धोनीको सन् २०१० मा विवाह भएको थियो ।
धोनीकी पत्नी साक्क्षीले आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा एउटा फोटो पोस्ट गरिन् । पोस्टले दुई लाखभन्दा बढी लाइक पाइसकेको छ ।
तर यो तस्वीरका कारण उनले आलोचना पनि बेहोर्नुपरेको छ ।उनले छालाको रंग भएको ब्लाउज लगाएकी छन् र धेरै मानिसलाई यो चित्त बुझेन । यसलाई मानिसले अ’र्धन’ग्न तस्वीरका रुपमा बुझेका छन् । भारतीय परम्पराअनुरूप यो लुगा नभएको भनी उनको आलोचना भयो ।
बन्जी जम्पर ३३० फीट माथिबाट हाम्फाल्ने क्रममा डोरी चुडिँदा …. (हेर्नुहोस भिडियो)